Antonio Sanchez-Benedito : Notolorana Commandeur de l’Ordre National Malagasy -
AccueilRaharaham-pirenenaAntonio Sanchez-Benedito : Notolorana Commandeur de l’Ordre National Malagasy
Notontosaina omaly maraina ny fanoloana mari-boninahitra ny masoivohon’ny vondrona Eoropeanina, Antonio Sanchez-Benedito, amin’ izao fahavitany ny asany sy ny iraka izay notontosainy teto Madagasikara alohan’ny hihazoany an’i Mozambika , ny minisitry ny raharaham-bahiny malagasy Dovo Eloi Maxime no nanolotra azy izany fankasitrahana izany .Tsiahivina tokoa fa nahitan’ny firenena tombontsoa ny fiaraha-miasa taminy, indrindra raha ny lafin’ny fampandrosoana no resahina, anisan’izany ny famatsiam-bola amin’ ny alalan’ ny FED andiany faha-11izay nosoniavina tany Bruxelles, ka mitentina 518 Tapitrisa Euros no famatsiam-bola izay tafiditra amin’ ny programam-pamantarana nasionaly na ny PIN. 200 tapitrisa Euros no vola efa navoaka sy nampiasaina nahafana nanangana fotodrafitrasa fampandrosoana toa ny fotodrafitrasa any ambanivolo sy ny fanatsarana ny fanjakana tsara tantanana tamin’ ny alalan’ io 11 eme FED io. Ankoatra izay dia teo foana ihany koa ny vondrona Eoropeanina raha nisy ny loza voajanahary nandalo teto amin’ ny firenena, ary tsy hohadinoina amin’ izao fotoana izao ny fanohanana izay ho entin’izy ireo amin’ny alalan’ ny SACEM kitapom-bola hanohanana ny fifidianana.
Nandritra ny lanonana moa dia tsy nitsahatra nitondra ny fisaorana avy amin’ ny filoham-pirenena malagasy ny lehiben’ ny diplomasia malagasy Dovo Eloi Maxime, nambarany tamin’izany fa « ny taona efatra izay niasanao teto Madagasikara dia nitondra hery lehibe ho an’ ny firenena, satria dia nifanindran-dalana tamin’ny fanampiana ny firenena malagasy nandritra ny fotoana sarotra ny fanampiana avy amin’ ny vondrona eoropeanina » hoy hatrany i Dovo Eloi Maxime. Noho izany dia nanome toky ny minisitry ny Raharaham-bahiny malagasy fa tsy handraraka ilo ny ezaka izay efa natao. « Manome toky anao izao atoa masoivohon’ny vondrona eoropeanina fa ny ezaka natao dia tsy ho very anjavony, satria i Madagasikara dia mahatsapa fa ny fifidianana malalaka, mangarahara sy eken’ny rehetra no miantoka ny fitonian’ny firenena sy antoky ny fampandrosoana » hoy hatrany ny filohan’ ny diplomasia malagasy.
Tsiahivina fa amin’ity anio ity no handao an’i Madagasikara ny masoivohon’ny vondrona eoropeanina niasa sy monina teto amintsika nandritra ny efa-taona ity, marihina fa i mozambika indray no tany hiasany manaraka ary nanendrena azy. Ny masoivohon’ ny vondrona eoropeanina moa izay nanambara ny fahafaliam-pony tamin’ ny fahavitany amin’ ny antsakany sy andavany ny asa izay notontosainy teto Madagasikara, anisan’ny mahafaly ahy ihany koa ny mijery ny vokatry ny asa vita nandritra izay fotoana niasako teto izay, anisan’izany ny fametrahana ny programam-pampandrosoana » hoy hatrany ity lehiben’ny diplomasian’ny vondrona eoropeanina ity. Efa nohantintrateriny hatrany ihany koa ny mikasika ny fifidianana ho avy fa ilaina jerena ny tokony hametrahana ny fitoniana mialoha sy mandritra ary aorian’ ny fifidianana. Ny fahavitan’ny fifidianana lavitry ny filaminana sy ny korontana irery ihany hoy i Antonio Sanchez-Benedito no ahafahana miantoka ny tena fampandrosoana marina sy maharitra.